GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee Warsidaha Puntlandtimes.com uu saaka ka helayo degmada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaqyo ciidan laga dareemayo saaka deegaankaasi.
Dhaq dhaqaaqyadani ciidan oo ay wadaan ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa yimid kadib markii maalintii shalay ahayd ay Somaliland weerartay saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin degmada Hadaaftimo, waxaana dagaalkii shalay dhex maray labada dhinac uu sababay khasaarayaal kala duwan.
Somaliland ayaa dhankeeda ka sheegatay dagaalkaasi guul halka Puntland ay shaacisay in Somaliland ay ka qabsatay gaadiid dagaal iyo maxaabiis, waxaana saaka goobihii dagaalku ka dhacay ka baxay ciidamada Somaliland oo maalintii shalay ahayd weeraray kuwa Puntland.
Jawiga saaka ayaa u muuqda mid dagaal, waxaana dhinac walba uu wadaa dhaq dhaqaaq xoogan oo dagaal sababi kara.
Weli ma cada cida gacan sarayn karta hadii mar kale uu dagaal ka dhaco deegaankaasi, hasa yeeshee gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu arkayaa deegaanka Hadaaftimo.